आज नाग पञ्चमी, यसरी नाग देवताको पूजा गर्नुहोस् (विधि सहित)
July 25, 2020 1569
हिन्दु धर्म, परम्पराअ’नुसार प्रत्येक वर्ष श्रावण शुक्ल पञ्चमीका दिन मनाइने नाग पञ्चमी आज नागको पूजा अर्चना गरी ना’ग पुजा मनाइँदै छ ।
घरको मूल ढोकामा नागको तस्बि’रसहित नाग’का अष्ट कुल अर्थात् अनन्त, बासुकी, पद्म, महापद्म, तक्षक, कुलीर, कर्कट र शंख नागको आजकै दिन पूजा आरा’धना गरिन्छ ।
यसरी नागको तस्बिर टाँस्दा’ वर्षभर घरमा नाग, सर्प, बिच्छी लगायतका जीवले दुःख नदिना’का साथै अग्नि, मेघ र चट्याङ’को भयबाट पनि बच्न सकिन्छ भन्ने धार्मिक विश्वास छ ।
यस दिन बिहानै उठी स्ना’न गरी दीप, कलश, गणेश गरी गोबरको नाग बनाई ‘पूजाआजा गरिन्छ । आजको दिनमा विभिन्न नागको वासस्थान भएका स्थानहरू पोखरी, पानी भए’को कुवा इना’रमा गएर पूजा गर्ने चलन छ ।
नाग पूजाको प्रचलन वैदिक का’लदेखि नै सुरु भएको हो । वैदिक मान्यता’अनुसार नागलाई सर्पको राजा मानिन्छ । नाग रिसाए भने पानीको अभाव हुने भएकाले पानीका लागि पनि ना’गलाई खुसी पार्न पूजा गर्ने परम्परा बसेको हो ।
वराहपुराणमा उल्लेख भएअ’नुसार श्रावण शुक्ल पञ्चमीमा नागराजसँग ब्रह्माको संवाद भएकाले पनि आजको दिन’मा नाग पूजा गर्ने गरिन्छ ।
नागलाई विष्णु र शिवको प्रतीकका रू’पमा मान्ने प्रचलन वैदिक सनातनकालदेखि नै चल्दै आएको छ ।
भगवान् शिवले नाग’को माला लगाउने र भगवान् विष्णु जलमाथि शेष नागको शय्यामा फणाको छाता ओढी श’यन गर्ने भएकाले दुवै भगवानलाई नागका रूपमा मान्ने गरिएको हो ।
आज नाग पोखरी, दह, भक्तपुरको सिद्धपोखरीलगायत देशभरका नाग दह, कुण्ड र नाग स्थानमा विशेष’रुपमा पूजाआजा गरी नागको सम्मानका साथ गाईको दूध, अक्षता, दुबो, खीर र रोटी लगायतका परिकार प्रसाद चढाउने गरिन्छ ।
मेष (चू,चे,चो,ला,लि,लू,ले,लो,अ) अध्ययन तथा अध्याप’नमा सफलता प्राप्त गर्न अलि बढी नै मेहनत गर्नु पर्नेछ । आमा तथा आफन्तबाट भनेजस्तो’ सल्लाह तथा सुझाव ‘पाइने हुनाले सुधारात्मक काम गर्न सहयोग हुनेछ । कृषि तथा पशुपालन व्यवसायबाट राम्रो आम्दानी हुनेछ । समाजिक काममा समय दिनु पर्नेछ भने तपाईँको कामदेखि सबै खुसी हुनेछन् । प्राकृतिक प्रकोप तथा बिपत्तिदे’खि सावधान हुनुहोला समय मध्ययम रहेकोछ ।
बृष (ई,ऊ,ए,ओ,वा,वी,वू,वे,वो) प्रणय सम्ब’न्धमा सुधार हुनेछ भने एक अर्काको सहयोगले खोजमुलक विषयमा मन जानेछ । दाजुभाइको सहयोगले राम्रा तथा परिणा’ममुखी कामगर्न सकिनेछ । विवादित विषयहरु तपाईँकै पक्षमा आउने हुँदा मन प्रशन्न रहनेछ । औषधीजन्य तथा खाद्यान्नसँग सम्वन्धीत सामानको खरिद बिक्री’मा वृद्धि हुनेछ भने अन्य सामानको व्यापारमा मन्दि आउँने तथा घाटा लाग्नेछ ।
मिथुन (का,की,कू,घ,ङ,छ,के,को,हा) मिठो बोल्दा पनि बिपक्षीहरुले गलत अर्थ लगाई तपाईँको’ साख गिराउन खोज्नेछन् । प्रलोभनमा पारेर आफ्नै हरुले रुपैयाँ पैसा लान सक्छन् ध्यान दिनुहोला । व्यापार व्यवसायमा प्रशस्त समय दिएपनि आम्दानी थोरै हुनेछ । प्रणय सम्बन्धमा चिसोपनको विकास हुन सक्छ ध्यान दिनु’होला । कुटुम्ब तथा आफन्तसँग कुनै पनि काम गर्दा ध्यान दिनुहोला पछि आर्थिक कुरामा राय बाजिने तथा मनमुटाब सिर्जन हुँन सक्छ ।
कर्कट (ही,हू,हे,हो,डा,डी,डु,डे,डो) वन्द व्यापारबाट न्यून लाभ लिन सकिनेछ भने आस मारेको काम बन्नाले उत्सा’ह जाग्नेछ। एउटै कामबाट दोहोरो लाभ मिल्नेछ। आफन्त तथा साथीभाइहरुको सहयोगमा विशेष योजनाहरू बन्नेछन्। छिमे’की तथा समुदायको हितमा राम्रै काम गर्न सकिनेछ। सामाजिक उत्तरदायित्व वहन गर्दै फाइदा हुने काम र जिम्मेवारी हात पार्ने मौका छ। प्रेममा रमाउन चाहनेहरुका लागि समयले साथ दिनेछ ।
सिंह (मा,मी,मू,मे,मो,टा,टी,टू,टे) कुनैपनि आ’र्थिक कारोबार गर्दा सचेत हुँनुहोेला आर्थिक कारोबार बिग्रिने तथा दण्ड तथा जरिवाना हुने सम्भावना रहेकोछ । स्वास्थ्यमा समस्या आई उपचार खर्च बढेर जाने ग्रहयोग रहेकोेछ । पढाइ लेखाइ तपाईँ आ’फ्नै कारणले बिग्रन सक्छ ध्यान दिनु होला । काम वा अध्ययनको शिलशिलामा विदेशी भूमिमा हुनुहुन्छ भने सरसफाइमा विशेष ध्यान दिनुहोला ।
कन्या (टो,पा,पी,पू,ष,ण,ठ,पे,पो) आर्थिक अवस्था उकास्न गरिने क्रिर्याकलापहरु फस्टाएर जाने हुनाले मनग्गे आम्दा’नी हुनेछ । बुवाको धन परिचालन गरि लाभ ‘लिन सकिनेछ । शिक्षा तथा यस्तै क्षेत्रमा लगानी गर्ने अवसर आउनेछ । दाजुभाइको सहयोगले सवारी साधन जोड्न सकिनेछ भने प्रेम तथा मित्रतामा आत्मियताको विका’स हुनेछ । अध्ययनमा सुधार भएर जाने हुनाले अरुभन्दा अग्र स्थानमा तपाईँको नाम आउनेछ ।
तुला (रा,री,रु,रे,रो,ता,ती,तू,ते) बौद्धिक क्षमतामा बृद्धि हुनाले राजनीतिमा आजको दिन पद पाउने योग रहेकोछ । प्रतिष्ठित व्याक्तिको सहयोगले उपलब्धी मुलक का’महरु बन्ने तथा सामा’जिक क्षेत्रमा नाम कमाउन सकिनेछ । सत्रु परास्त हुनेछने भने विद्या तथा प्रतिस्पर्धामा तपाईँकै नाम आउँनेछ । व्यापार व्यवसायमा न्यून नाफा कमाउन सकिनेछ । तरपनि वाहिरी वातावरण तथा सरसफाइमा ध्यान दिनुहोला ।
बृश्चिक (तो,ना,नी,नू,ने,नो,या,यी,यू) धार्मिक कार्य तथा परोपकारमा मन जानेछ। खानपानमा ध्यान दिनुहोला स्वास्थ्यमा कमजोरी अनुभव हुनेछ।
खराब आच’रण भएका व्याक्तिहरुले फ’साउने तथा केही बाध्यात्मक परिस्थितिसँग सम्झौता गर्नुपर्ला। आशा देखाउनेहरूको भरपर्दा काम बिग्रनेछ । धार्मिक क्षेत्र तथा परोपकारी काममा सहभा’गि भई काम गर्ने अवसर जुर्नेछ ।
धनु (ये,यो,भा,भी,भू,ध,फा,ढा,भे) समयको ख्याल नगर्दा वा साना तिना काममा अल्भेर बस्दा महत्वपुर्ण कामहरु थाति रहनेछन् । बाटो हिड्दा वा सवारि साधन प्रयोग गर्दा ध्या’न दिनुहोला गन्तब्यमा पुग्नु अगावै विभिन्न ‘समस्याहरुको सामना गर्नु पर्नेछ ।
लामो समयदेखिको माया प्रेममा ब्रेक लाग्नेछ । स्वास्थ्यमा समस्या आई दैनि’की प्रभावित हुनेछ ध्यान दिनुहोला । पढाइ लेखाइमा समय दिए पनि भनेजस्तो उपलब्धि हासिल नहुन सक्छ ।
मकर (भो,जा,जी,जू,जे,जो,ख,खी,खू,खे,खो,गा,गी) उद्योग तथा व्यापारमा लगानी गर्ने अवसर गुम्न सक्छ । सुभचिन्तकहरुको सहयोग तथा सद्भाव पाइने हुनाले समय’मा नै कामहरु सम्पन्न हुनेछछन् ।
भौतिक सम्पति तथा विलाशि बस्तुको प्रयोग मार्फत अरु’को मन आफूतिर लोभ्या’उन सकिनेछ । बन्धु बान्धबहरुको सहयोग तथा समर्थन पाइने हुनाले उपलव्धिमुलक कामहरु गर्न सकिनेछ । प्रेम प्रसंगमा रमाउन चाहनेहरुका लागि समयले साथ दिनेछ ।
कुम्भ (गू,गे,गो,सा,सी,सू,से,सो,दा) माया प्रेम’मा सामिप्यता बढ्ने तथा दाम्पत्य जीवनको गाठो अझ मजबुत भएर जानेछ । मावलि पक्षबाट भनेजस्तो सहयोग’ प्राप्त हुनेछ । लामो दुरिको अफि’सियल यात्राको अधिक सम्भावना रहेकोछ ।
मुद्दा मामि’लामा प्रतिस्पर्धिहरुलाई हराउँदै जित निकाल्न सकिनेछ । पढाइ लेखाइमा मन जाने हुनाले अरुभन्दा अग्र स्थानमा तपाइको नाम रहेनेछ ।
मीन (दी,दू,थ,झ,ञ,दे,दो,चा,ची) सन्तान तथा परिवारले तपाईँको काममा खासै सहयोग गर्ने छैनन् भने अपाइएको आलो’चना गर्नेहरु बढ्ने ग्रहयोग रहेकोछ । सामान्य स्वास्थ्य सम्बन्धि समस्याले सताउँने हुँदा दैनिक काम गर्न अ’सजिलो मह’शुस हुनेछ । माया प्रेममा धोका हुनेछ भने घर परिवारमा आफन्त तथा पति पत्निबीच मनमु’टाब बढ्नेछ ।
Posted in धर्म/संस्कृति, समाचार
Prevभोलि नाग पञ्चमी, यसरी गर्नुहोस् नागको पूजा (विधि सहित)
Nextकिन गरिन्छ नाग पूजा ? किन टासिन्छ नाग ? यस्तो छ ‘नाग महिमा’
दुर्घ-टनापछि गायिका टिका सानुको भयो यस्तो अवस्था, आमाबुवा सम्झेर रोइन् (भिडियो सहित)
विवाहपछि पति विजयेन्द्रसँग मन्दिर दर्शन गर्न निस्किइन् श्वेता (भिडियो सहित)
मेरो छोरालाई छातीमा च’क्कुले रोपेर फनफनी घुमाए भन्दै आमाछोरा भक्कानिए (भिडियो सहित)
के तपाईंलाई पायल्स छ ? निको पार्न अपनाउनुस् यस्तो घरेलु विधि